Sida loo noqon farsamo ah macluumaadka caafimaadka | USAHello | USAHello
Sida loo noqon farsamo ah macluumaadka caafimaadka
daryeelka caafimaadka ee USA waa warshadaha weyn. Maalin walba, isbitaalada iyo dhakhaatiirta xafiisyada saaro malaayiin bog oo warbixin ku saabsan bukaanka ay. Waxay u baahan farsamo macluumaadka caafimaadka si ay u caawiso inay fahmaan oo ku kaydinaysa xogta. Ogow sida ay u noqdaan farsamo ah macluumaadka caafimaadka.
Waa maxay farsamo ah macluumaadka caafimaadka?
farsamo daryeel caafimaad akhriska iyo gudbiso diiwaanka caafimaadka. Joornaalka waxa ay muhiim u yihiin nolosha iyo caafimaadka dadka. dadka xirfadda u qabanqaabiyaan iyo maarayn macluumaadkan. Magaca shaqo tani waa farsamo macluumaadka caafimaadka (Hit) ama diiwaanka caafimaadka farsamo.
Maxaad ka fili kartaa in shaqo ee farsamo macluumaadka caafimaadka?
Waajibaadka farsamo ah macluumaadka caafimaadka
Waajibka ugu weyn ee farsamo ah macluumaadka caafimaadka waa in ammaan diiwaanka caafimaadka, sax ah, iyo ilaa taariikhda. Dhakhaatiirta, kalkaalisooyinka, maamulayaasha isbitaalka, iyo shirkadaha caymiska caafimaadka oo dhan u baahan tahay macluumaad sax ah in la heli karo iyaga. Ku dhawaad ​​xogta oo dhan waxaa lagu hayaa on kombiyuutarada. Dhowr waa warqad, iyo waraaqaha, kuwaas oo loo baahan karaa in la marsiiyey and filed.
Hits loo hubiyo in dhammaan shaqaalaha kale ee caafimaadka (sida dhakhaatiirta, kalkaalisooyinka iyo farsamayaqaanada caafimaadka) diiwaanada caafimaad dhameystiran. Hits waa in ay fahmaan oo ay isticmaalaan codes loo isticmaalo hababka caafimaad ee kala duwan.
Daawo video ah oo ku saabsan shaqada ee ka dhacay ah
Hits intooda badan ka shaqeeyaan cusbitaalada. Waxa kale oo ay ka shaqeeyaan laga yaabaa in xarumo caafimaad iyo xafiisyada dhakhaatiirtu. Qaar ka mid ah hits shaqeeyaan guriga. Hits sidoo kale ka shaqeyn kartaa shirkadaha caymiska caafimaadka, dowladda, ama cilmi baaris caafimaad.
MUSHAHARKA for farsamo macluumaadka caafimaadka
In 2017, mushaharka caadiga ah Hits ahaa oo ku saabsan $39,000 sanadkiiba. Laakiin mushaarkiisa sannadlaha ah wuxuu noqon karaa mid ka badan $70,000 shaqaalaha khibradda leh ee qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ama yar intii $25,000 shaqaalaha heer-galo meelaha miyiga ah.
Waa maxay nooca qofka ka dhigaysa a farsamo macluumaad caafimaad wanaagsan?
fiiro gaar ah u faahfaahsan - shaqo ka dhacay waxaa ka buuxa faahfaahin yar iyo waa in uu ahaado mid sax ah
anshaxa wanaagsan – diiwaanka caafimaadka waa qarsoodi ah
kartida si ay u falanqeeyaan macluumaad - xogta ku dhacay waxaa ka mid ah macluumaadka caafimaadka ee adag iyo xeerarka
fahamka ereyada caafimaadka
fahamka nidaamka sharciga ah
aqoonta kharashka daryeelka caafimaadka iyo bixinta
tababar ku saabsan nidaamyada caafimaadka sireed
Waa maxay tababarka, shahaado iyo waayo-aragnimo samayn farsamo macluumaadka caafimaad ee u baahan?
Tababarka farsamo macluumaadka caafimaadka
tababar ugu badan waa koorso in Management Information Caafimaadka. Dabcan waa in la aqoonsan yahay (oggolaaday) Guddiga on Aqoonsiga for Aqbaarta Caafimaadka iyo Warfaafinta Education Management (Cahit). CAHIIM The- Dabcan aqoonsan idin siin doonaa shahaadada associate ah ee. Dabcan sida caadiga ah qaadataa laba sannadood,. Waxaad ka heli kartaa koorso la aqoonsan kuu dhow iyada oo loo marayo Cahim database.
On database CAHIIM ah, dooro gobolkaaga ka menu dropdown ah. De-xulo dhammaan barnaamijyada laga reebo "Management Information Caafimaadka : Degree Associate. "Haddii aad rabto inaad wax ka barato online, de-dooro "Campus ku salaysan." Markaas dooran "Search."
Haddii barnaamijyada ma ku soo kor ee gobolka, isku day gobolka dariska ah. Waxaa jira 109 koorsooyin online on database iyo dad badan oo koorsooyin campus ku salaysan more.
Certification for farsamo macluumaadka caafimaadka
Waxaa jira caddeyn dhowr ah noocyada kala duwan ee ku dhacay. Qaar ka mid ah si gaar ah waxaa loogu talagalay sireed nidaamka ama diiwaanka kansarka. The shahaado ugu guud waa macluumaadka caafimaadka Farsamo Registered (Hri waxaa ः) shahaado. Si aad u codsato RHIT, aad u baahan tahay si ay u dhamaystiraan CAHIIM a- Dabcan la aqoonsan yahay.
Khibrad waa muhiim, aad. Tusaale ahaan, haddii aad ka shaqaysay sida soo dhoweynta ah ee xafiiska dhakhtarka, aad ka soo baratay doonaa si ay u maareeyaan macluumaadka. karaaniga A caafimaad oo khibrad u leh codes caafimaadka. Kuwani waxay shaqooyin hore kaa caawin kartaa inaad noqoto farsamo ah macluumaadka caafimaadka ee aan Dabcan kulliyad. laga yaabaa in aad wali u baahan doontaa shahaado.
xirfadaha farsamada Computer
Dabcan GED® online Free
Baro shahaado RHIT ah
Raadi mushaaraadka iyo tirooyin kale oo Hits magaalada ama gobolka aad
Baro shaqooyin ku saabsan la mid ah